Manga "टाइटन मा आक्रमण" को भविष्यको लागि संघर्ष। वर्ण जापानी हास्य
रूस मा जापानी हास्य व्यापक स्वीकृति भेटिएन छन्। तर, बढ्दो सूर्य को कला निर्देशन को प्रशंसक इन्टरनेट को brightest प्रतिनिधिको पाउन सक्छ। यी मध्ये "टाइटन मा आक्रमण" छ। अक्षरहरू, साथै हास्य बारेमा सामान्य जानकारी, यस लेखमा समेटिएको गरिनेछ।
को आक्रमणकारीले विशाल
यो Manga को शैली आधिकारिक एउटा पोस्ट-apocalyptic छ। र साँच्चै, तपाईं ध्यान दिएर हेर्न भने, तपाईं हलिउड blockbusters, अक्सर भविष्यबारे कुरा, निकट भविष्यमा हुनेछ जो संग समानता पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै काल्पनिक ब्रह्माण्ड को हास्य पुस्तक "आक्रमण टाइटन मा" मा आएको छ। केहि बचे बीच परियोजना को वर्ण धरती जीवित मा जीवन सुरक्षित गर्न सबै गर्न वाचा गरेका छन्।
cannibals संग लडाई
जो हाम्रो ग्रह बन्धनमा चाहन्थे गरेको छैन! मानिसहरू आफूलाई शुरू र विदेशी जात संग समाप्त हुन्छ। एक पटक एक समय मा सारा संसार एक विशाल विशाल Titans द्वारा, एक पल मा शान्तिपूर्ण earthlings मा तल दरार नष्ट भएको थियो। शहर को आफ्नो रक्षा को लागि विशाल उचाई र शक्ति पर्खालहरु निर्माण भएको थियो। तिनीहरूले यो युद्धमा बच्न व्यवस्थित गर्ने ती को रहलपहल लुकाउने थिए। बाहिर संसारमा मानिसले खाने वालों प्रभुत्व छ। तिनीहरूले अन्तिम आश्रय नष्ट गर्दा, बचे आफ्नो राष्ट्रको बचत गर्न प्रतिरोध को एक सेना बनाउन रहन्छ ...
त्यो कसरी एनिमे वर्ण "टाइटन मा आक्रमण" प्रसिद्ध "टर्मिनेटर" को तेस्रो भाग मा Dzhona Konnora को कुरा भयो छ। बाहेकलाई, उहाँलाई विपरीत तिनीहरू किशोरीहरूको छन्, तर बल र साहस, यो unequal लड्न सक्षम छन् जो देखाए।
humanoid प्रतिनिधिको संग पहिलो पटक जात मान्छे को Manga को घटना अघि एक सय वर्षसम्म भेटे। एकै समयमा त्यहाँ ग्रह को एक विशाल जफती थियो। यस सहर वसोवास उच्च पर्खाल निर्माण र दिग्गज नष्ट सक्ने एक हतियार सिर्जना गरियो। विशेष मात्र प्रशिक्षित सैनिकहरू अनुमति पर्खालहरु परे जानुहोस्।
खुलस्त, यो Manga मा वर्णन कहानी, एकदम रोचक छ। अर्को शब्दमा, यो सुंदर कल्पना रुचि छैन। र षड्यन्त्र ज्यादातर कल्पना हुनत, यो बिस्तारै विश्वास गर्न थाल्छ। यो परियोजना, दर्शकहरूलाई मूल्यांकन थियो कसरी हास्य पुस्तक "टाइटन मा आक्रमण" सामना छ।
किशोरीहरूको प्रतिनिधित्व वर्ण मुख्य लडाकु भएका छन् कि। शहर पर्खाल विनाश भएपछि, Eren अर्को सुरक्षित स्थान सार्न नौका पठाइयो। उहाँले साथीहरूबाट Armin र Mikasa सामेल गर्नुपर्छ। पाँच वर्ष पछि तिनीहरूले watchtowers नयाँ गढ "गुलाब" निर्माण हुन्छन्। आक्रमण भएपछि दिग्गज हुन्छ। Eren तिनीहरूलाई मध्ये परिवर्तन क्षमता discovers। उहाँले यो वास्तवमा व्याख्या गर्न सक्दैन, तर यो अर्को दिशा मा युद्धमा निर्देशन गर्न मद्दत गर्छ।
"टाइटन मा आक्रमण": अक्षरहरू एक जीवनी
, अर्थपूर्ण लगनशील, तर आवेगशील र विस्फोटक वर्ण आफ्नो परिवार घर विनाश पछि त हुन्छ जो। अब देखि, जवान सचमुच दिग्गज हटाउन मद्दत गर्छ कि कुनै पनि संकेत फेला पार्न विश्वको अन्वेषण खींचती। तिनीहरूलाई नष्ट - यो प्राथमिक कार्य Eren छ। बाल्यकाल मा, केटा दास Mikasa, आफ्नो मित्र बनेको बाट उद्धार गरिएको थियो। उहाँले मौका पनि cannibals हुन जहाँ बाहिर आंकडा गर्न प्रयास गरिएको छ। Eren पूर्वजन्ममा को रहस्य प्रकट गर्दा तिनले आफ्नो भावना र शक्ति पक्कै असर गर्नेछ भन्ने शत्रुहरूमाथि भविष्यमा विजय नियन्त्रण गर्न सिक्छन्।
नेतृत्व महिला चरित्र poluaziatka। Eren उनको केवल एक मित्र सुरक्षित विश्वास गर्दछन्। त्यो गोप्य उहाँलाई प्रेम, तर उहाँले बदला संग Obsessed रूपमा भावना याद छैन। Mikasa निरन्तर तिनले उसलाई हेरविचार लिन्छ, Eren पालना र आफ्नो प्रेम लुकाउन हरेक सम्भव तरिकामा उहाँको सुरक्षा। राम्रो लडाकु, एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार, आफ्नो धैर्य राख्न सक्षम।
मात्र एक तीन फरक शारीरिक कमजोरी को जो। उहाँले आफ्नो incompetence देखेर, यो देखि पीडित। यो मित्र मा निर्भर गर्दछ। दुर्लभ अवस्थामा, यो ती सबै सम्भव समर्थन प्रदान गर्दछ। आंशिक उहाँले घृणा, तर कम्पनी Eren र Mikasa राखिएको। इच्छित भने, यो एक योग्य लडाकु बन्न मौका छ।
विविध "टाइटन मा आक्रमण"
वर्ण सूची Eren, Mikasa र Armin सीमित छैन। ती तीन बस दिग्गज-cannibals संग लडाई को क्षेत्र प्रवेश गर्न सकेको छैन। को एनिमे वर्ण को आफ्नो निर्माताहरू समर्थनमा धेरै वर्ण को समग्र सूची पूरक। ती सबै षड्यन्त्र गर्न धेरै महत्वपूर्ण हो:
रेनर Braun। प्रमुख antagonist। प्रोग्राम Titans फिर्ता आउन र Eren चोर्न। अस्थिर mentality संग वर्ण, तपाईं त्यहाँ दुई संघर्ष Opposites छन् कसरी देख्न सक्छौं।
Bertolt हूवर। उहाँका घनिष्ठ मित्र। एक कायता को सबै भन्दा राम्रो गर्न, उहाँले एकान्त रुचि। जासूस mishandled - उहाँलाई त्यो विचार मा धक्का धेरै oddities नोटिस लागि।
एनी Leonhart। त्यो सैन्य प्रहरी जान चाहन्छ। यो Eren नाश गर्न निर्देशन लागेकाहरू एक थिए। उहाँले कार्य असफल भयो र त्यसपछि यसरी Titans अस्तित्व, को दिग्गज बारेमा जानकारी संरक्षण, क्रिस्टल आफूलाई लक।
जीन Kirshtayn। म Ehren को डाह, Mikasa मा प्रेम। तथापि, हदसम्म सहमत छ। cannibals, को फौजको जाचबुभ्क सदस्य संग टकराव संलग्न।
Krista Lenz, राम्रो केटी, अरूलाई मदत गर्न इन्कार छैन। एक महान परिवार चावल देखि आ, तर यो एक बिहे नभएको बच्चा छ किनभने यो बाट एक बच्चाको रूपमा बहिष्कार गरिएको थियो।
"आक्रमण टाइटन मा" सफलता को हास्य को प्रकाशक, उपन्यास को एक श्रृंखला प्रकाशित भनेर ठूलो थियो। तिनीहरूलाई केही फिल्म मिलाइएको विषय थिए। उत्पादन सुविधा फिलिम र एनिमे श्रृंखला छ।
"सबै को सर्वश्रेष्ठ, कि कहिल्यै यो विधामा सिर्जना भएको थियो" - यस्तो शीर्षकहरू Manga समीक्षा "टाइटन मा आक्रमण" भरिएको थियो। वर्ण, दृश्य, समग्र तस्वीर लामो समय को लागि स्मृति मा रहनेछ। एक टेम्पलेट र पहेली को एउटा ठूलो भरिएको ताजा कहानी छैन। हास्य उपस्थिति केही दृश्यहरू धेरै दमनकारी र शानदार थियो जो समग्र वातावरण, dilutes। जापानी एनिमे "टाइटन मा आक्रमण" सबै प्रशंसक निश्चित जस्तै हुनेछ!
सर्वश्रेष्ठ युवा श्रृंखला - शीर्ष दस
"Divergent" मा सम्बन्धित चलचित्र। प्लट विवरण
ठूलो अभिनेत्री भइन् Daria Hramtsova व्यायाम गर्ने व्यक्ति
जीवनी Dzheki chana, सिनेमा को Legends
आदिवासी वा दूध: बच्चाको teething
टोपी राल्फ लरेन - स्टाइलिश, सुशील, सुन्दर
मूल क्षय: कारण र उपचार
Rhinos को प्रकार: विवरण। तपाईं बच्चा गैंडा के भन्छौ?
Quetelet सूचकांक - एक ल्यान्डमार्क वयस्क र छोराछोरीको स्वास्थ्य
प्रसब को इतिहास। उचित तयारी
केले रूस जहाँ ल्याउन? जहाँ केले रूस लिइएका भइरहेका छन्?
Shevchenko Maksim Leonardovich: छोटो जीवनी